NguYeremiya 33 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya okwesibini, esavalelwe entendelezweni yentolongo, lisithi,
2 UtshoUtsho uYehova, uMenzi woku; uYehova, uMyili woku, ukuba akuzimase; ugama lakhe linguYehova, ukuthi,
3 Ndinqule, ndikuphendule, ndikuxelele izinto ezinkulu ezinqabileyo, ongazaziyo.
4 Ngokuba utshoutsho uYehova, uThixouThixo kaSirayeli, ngazo izindluizindlu zalo mzi, nangezindlu zokumkani bakwaYuda ezidiliziweyo ngenxa yeendonga zokungqinga, nangenxa yekrele;
5 bakubona ukuba baza kulwa namaKaledi, bazizalisa ngezidumbu zabantu, endibabulalayo ngomsindo wam nangobushushu bam, ekungenxa yezinto zabo zonke ezimbi, ukuba ndibusithelise ubusoubuso bam kulo mzi:
6 ukuthi, YabonaYabona, ndiwubopha ngezinto ezibotshwayo, eziphilisayo, ndibaphilise, ndibatyhilele ukuphuphuma koxolo nenyaniso.
7 Ndiya kukubuyisa ukuthinjwa kukaYuda nokuthinjwa kukaSirayeli, ndibakhe njengokwasekuqaleni.
8 Ndobahlambulula ebugwenxeni babo bonke, abone ngabo kum; ndibuxolele ubugwenxaubugwenxa babo bonke, bone ngabo kum, bakreqa ngabo kum.
9 Lo mzi uya kuba ligama lemihlali kum, indumiso nesihombo kwiintlanga zonke zehlabathi, eziya kukuva konke okulungileyo endikwenzayo kuwo, zinkwantye, zigungqe ngenxa yokulunga konke, nangenxa yoxolo lonke, endiwenzela lona.
10 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Kuya kubuva kuviwe kule ndawo, nitshoyo ukuthi, Ilinxuwa, ayinabantu, ayinankomo, emizini yakwaYuda, nasezitratweni zaseYerusalem, ekusenkangala kuzo, ezingenabantu, ezingenabemi, ezingenankomo:
11 kuviwe izwi lemihlali nezwi lemivuyo; izwi lomyeni nezwi lomtshakazi; izwi labathi, Bulelani kuYehova wemikhosi, ngokuba elungile uYehova, ngokuba ingunaphakade inceba yakhe; abazisa imibulelo endlwini kaYehova. Ngokuba ndiya kukubuyisa ukuthinjwa kwelizwe, limiwe njengokwasekuqaleni; utshilo uYehova.
12 UtshoUtsho uYehova wemikhosi ukuthi, Kule ndawo ilinxuwa, ingenamntu, ingenankomo, nasemizini yayo yonke, kuya kubuya kubekho ikriwa labalusi, ababuthela imihlambiimihlambi yabo kulo.
13 Emizini yasezintabeni, nasemizini yasezithabazini, nasemizini yelasezantsi, nasezweni lakwaBhenjamin, nangeenxa zonke eYerusalem, nasemizini yakwaYuda, iya kubuya igqithe imihlambiimihlambi phantsiphantsi kwezandla zoyibalayo; utshoutsho uYehova.
14 YabonaYabona, kuza imihla, utshoutsho uYehova, endiya kulimisa ilizwi elilungileyo, endalithethayo kwindlu kaSirayeli nakwindlu kaYuda.
15 Ngaloo mihla nangelo xesha, ndiya kumhlumisela uDavide iHlumelo loBulungisa, eliya kwenza ngokwesiko nobulungisa ezweni.
16 Ngaloo mihla lona liya kusindiswa elakwaYuda, ihlale ikholosile iYerusalemiYerusalem, ukubizwa kwayo kuthiwe, UYehova-ububulungisa-bethu.
17 Ngokuba utshoutsho uYehova ukuthi, UDavide akayi kunqunyukelwa ndoda yakuhlala etroneni yendlu kaSirayeli;
18 banganqunyukelwa ndoda ababingeleliababingeleli abangabaLevi, yakunyusa amadini anyukayo ebusweni bam, iqhumisele ngeminikelo yokudla, yenze imibingelelo imihla yonke.
19 Kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya, lisithi,
20 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ukuba nithe nawaphula umnqophiso wam wemini, nomnqophiso wam wobusuku, ukuze kungabikho mini nabusuku ngexesha elililo:
21 woba uya kwaphulwa nawo umnqophiso wam noDavide umkhonzi wam, ukuba angabi nanyana ungukumkani etroneni yakhe; kwanabaLevi ababingeleliababingeleli, abalungiselela mna.
22 Njengokuba ungenakubalwa umkhosiumkhosi wezulu, ingenakulinganiselwa intlabathi yolwandle, ndiya kwenjenjalo ukuyandisa imbewuimbewu yomkhonziyomkhonzi wam uDavide, nabaLevi abalungiselela mna.
23 Kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya, lisithi,
24 Akukuboni na abakuthethayo aba bantu, besithi, Imizalwane yomibini, awayinyulayo uYehova, uyicekisile yona? Babagiba ke abam abantu, ngokokude bangabi saba luhlanga phambi kwabo.
25 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ukuba awumi umnqophiso wam wemini nowobusuku, ukuba imimiselo yezulu neyehlabathi andiyimisanga,
26 ndoba ndiya kuyicekisa nembewu kaYakobi noDavide umkhonzi wam; ukuba embewini yakhe ndingabi sathabatha abayilawulayo imbewuimbewu ka-Abrahamka-Abraham noIsake noYakobi, ngokuba ndiya kukubuyisa ukuthinjwa kwabo, ndibe nemfesane kubo.
IGenesis 8:22, 15:5, 49:10
ILevitikus 16:30, 27:32
IDuteronomi 30:5, 31:17, 18
2 Samuweli 7:12, 13, 16, 23:5
2 Kumkani 11:2
EyokuQala yeziKronike 16:34
IiNdumiso 74:16, 83:5, 85:7, 89:30, 36, 91:15, 100:5, 126:1, 130:8, 132:12, 147:3, 13
UIsaya 22:10, 42:8, 43:21, 51:3, 52:8, 55:13, 57:18, 19, 60:5, 61:6, 62:1, 2, 65:10, 66:22
NguYeremiya 7:34, 13:11, 16:21, 17:26, 23:5, 6, 29:10, 11, 12, 14, 30:3, 17, 31:12, 13, 14, 20, 24, 35, 36, 37, 32:2, 5, 18, 24, 42, 43, 44, 33:7, 11, 26, 35:19, 50:7, 19, 20
UHezekile 34:13, 36:20, 25, 35, 43:19
UDaniel 2:22, 23
Amosi 5:8, 9:14
UZefaniya 3:19, 20
1 KwabaseKorinte 2:9